ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများကြောင့် အခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးသည့် အချိန်အခါမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် ကနေဒါဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေ မမြင်သေးပါ. သို့သော်လည်း ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ပြန်သည့် သတင်းများအားလုံးက USD/CADအတွဲအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်ပါသည်. ဧပြီလ ၁၈ရက် ၁၇:၀၀ MTအချိန်တွင် ကနေဒါဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲမှ ကနေဒါနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်. လေသံမာပါက ကနေဒါ ဒေါ်လာ အားကောင်းလာနိုင်ပါသည်. မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမူ ၁၈:၁၅ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု သိရပါသည်.
forex ကုနျသှယျ cad